यात्रा संस्मरण: राप्ती एक्सप्रेस – OLIPOST.COM
Rohit Oli's personal blog.
यात्रा संस्मरण: राप्ती एक्सप्रेस
यस बर्षको दशैं नजिकिदै थियो । काठमाडौंमा कर्मथलो बनाउनेहरुका लागि घर जान पाउने अवसर वा बहाना पनि बन्दै थियो । नजिक घर हुनेलाई त त्यति समस्या नहोला तर टाढा घर हुनेका लागि भने एउटै कुराको चिन्ता हुन्थ्यो – घर जाने कसरी? अग्रिम टिकट कहिले खुल्ला? भनेको दिन टिकट पाउला कि नपाउला? । यस्तै चिन्ताले सताउनेमा म पनि एक थिएँ ।
‘अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्न ढिलाई’ भन्ने अखबारका खबरले यो चिन्तालाई झनै बढाइदिए । तर ढिलै भएपनि टिकट बुकिङ खुल्यो । पहिलो दिन नै टिकट लिन जानलाई फुर्सद थिएन । त्यसको २ दिन पछि असोज १ गते शनिबारको बिदा थियो । त्यहि दिन जाने निर्णय गरे ।
१ गते पनि आयो । मसंगै जानलाई साथी सितारामलाई पनि भनेको थिएँ । उसले भने अरुलाई भनेर टिकट लिइसकेको रहेछ । टिकट पाउला कि नपाउला? मान्छेको भिड कति होला? लाईन कतिबेर बस्नुपर्ने हो? आदि इत्यादी चिन्ताका बीच लागियो नयाँ बसपार्कतिर । (यद्यपि टिकट नपाएकै खण्डमा चिनेको मान्छेमार्फत भन्न लगाउने बिकल्प पनि थियो) । जब बसपार्क पुगियो, अवस्था सोचेभन्दा अलिक फरक थियो । म थोरै अचम्मित पनि भएँ, किनभने भिड सोचेभन्दा कम थियो । टिकट यसअघि नै सक्केर भिड कम भको त होइन? मनमा चस्को पस्यो । म आफ्नो काउण्टर तर्फ लागे । म झनै अचम्मित भएँ, किनकि लाईन त छँदै थिएन । टिकट सजिलैसँग पाइयो । त्यो पनि रोजेकै सिट नम्बर ‘ए’ साइडको ३ र ४ । सजिलै टिकट पाउनुको कारण त थाहा भएन, तर नयाँ यातायात समितिहरु र गाडीहरु थप भएकोले होला भनेर अनुमान लगाए । टिकट काट्दा त दुख भएन तर फर्कदा पानीले बेस्सरी चुट्यो ।
बसको टिकट थियो असोज १९ गते बेलुकि ५:१५ बजेको – रात्री बस । उक्त दिनको पर्खाईमा रहदै गर्दा अर्को चिन्ता थियो बस कस्तो पर्ने हो । अग्रिम बुकिङ्को टिकट भएको कारण गाडी नम्बर पनि थाहा हुदैन्थ्यो । जाने दिन काउन्टरमा गएर बस नं. राख्न लगाउनु पर्थ्यो । यसपटक नयाँ गाडिको संख्या थपेको तथा टिकट पनि सजिलै पाइएको कारण राम्रै कण्डिसनको गाडी पर्नेमा म ढुक्क थिएँ । जाने दिन पनि आयो । जसोतसो समयमै बसपार्क पुगियो । गाडिको नं. हालिसकेपछी गाडिको खोजिमा लागें । नम्बर हेर्दै गएँ, बस लाइनमै आइसकेको रैछ । तर नम्बर र बस हेर्दा मन झसंग भयो । किनकी बसको नम्बर ‘ना ४ ख’ बाट सुरु हुन्थ्यो । अलि पुरानो लटको परेछ । गाडी हेर्दा पनि पुरानै देखिन्थ्यो । जेसुकै भएपनि भित्रपट्टी र सिटहरु राम्रो हुनुपर्यो । मनमनै सोचें र सामान छतमा राख्न लगाएर बस भित्रतिर लागें ।
जब बस भित्र लागें, म आश्चार्यचकित भएँ । साँघुरा सिटहरु, साँघुरो गल्ली, सिटखोल पनि त्यति सफा नराखेका, हल्का नराम्रो गन्ध आएजस्तो आदि । मलाई त नाइट बस जस्तो पनि लागेन । लोकल बस जस्तो । मसंग जान लागेकी भतिजिलाई त त्यतिखेर नै बान्ता होला झै भयो । मन खिन्न बनाउदै सिटमा बसें । बस्दाखेरी नै अफ्ठेरो महसुस भयो । सिट ज्यादै साँघुरा थिए । फोल्डिङ गर्नुपर्यो भनि हात सिटमुनी घुसाएँ । फोल्डिङ गर्ने चिज कतै भेटिएन । भेट्न नि कसरी भेटियोस भाँचिसकेको रैछ । झनै दिक्क लागेर आयो । ठाडो ठाडो सिटमा बसेर रातभर यात्रा गर्नुपर्ने, त्यो पनि थानकोटतिरको जाम छिचोल्दै जानुपर्ने । सम्झदा झन् कहिले घर पुगौला झै भयो । गाडी गुड्यो ।
बसको बीच गल्लिमा बाहिर जानै कठिन हुनेगरी भरिभराउ सामान राखिएको थियो । यसपटक भुइमा यात्रुहरु चाहिँ राख्न नदिने भन्ने ट्राफिक प्रहरिको अन्तर्वार्ता केहि दिन अघि रेडियोमा सुनेको थिएँ । तर गाडी कलंकी नपुग्दै यात्रुहरु ठेलम ठेल भरिसकेका थिएँ । उक्त ट्राफिकको अन्तर्वार्ता सम्झेर मनमनै हाँसो लागेर आयो । कति चाँडै थानकोट पुग्न थालिएछ । यसपटक यो क्षेत्रमा किन जाम भएन अचम्मै लाग्यो । जे होस समयमै घर पुगिनेमा ढुक्क भएँ । थानकोट चेकपोष्ट पुग्नै लाग्दा गाडी रोकियो । ती बीचमा सवार यात्रुलाई चेकपोष्ट अगाडिसम्म हिडेर जान र त्यसपछि मात्र फेरि गाडिमा चढ्न सहचालक र कन्डक्टरले आदेश दिए । बिचारा यात्रु पनि आदेश मुताविक गर्न बाध्य थिए र त्यसै गरे पनि । मलाई त्यो चेकपोष्टप्रति समेत उपहास लागेर आयो ।
समयमै थानकोट पार गरिसकेका थियौं । जाम पनि थिएन । ओरालोमा बाहिरको चिसो हावा भित्र फ्यांक्दै गाडी अगाडि हुइकिरहेको थियो । अँध्यारो पनि भैसकेको थियो । यत्तिकैमा म निदाएछु । केहि समय पछि म झसङ्ग ब्युझिएँ । गाडी रोकिएको थियो । यात्रुहरु पनि सबै बाहिर झर्दै गरेका थिए । खाना खानलाई गाडी रोकेको रैछ । यो कुन ठाउँ हो भनी सोध्दा होटेलवालाले जवाफ दियो – “कृष्णभिर” । घडी हेरे रातिको साढे नौ बज्न थालेछ । यसपटक खाना पनि चाडै खुवायो । यस्तै यात्राको क्रममा एकपटक मैले रातिको १२:०० बजे पनि खाना ख्वाएको घटना सम्झिएँ । राजमार्गको खाना कहिले पो मीठो हुन्थ्यो र? खाली महंगो मात्र । खाए नखाए झै गरेर फर्किएँ आफ्नै गाडी भित्र ।
गाडी फेरि आफ्नै गन्तव्यमा कुद्न थाल्यो । केही बेर पछि म निदाउनै लागेको थिएँ, गाडी फेरि रोक्कियो । बिपरित दिशाबाट पनि गाडिहरु आइरहेका थिएनन् । के भएको र किन यस्तो भयो साहेद कसैलाई थाहा थिएन । हपहप गर्मीले गर्दा पसिना पनि बग्न थालेको थियो । यात्रुहरु कोहि बाहिर भित्र गरिरहेका थिए भने कोहि झ्यालबाट बाहिर हेर्दै थिए । म पनि बाहिर जाने सोचिरहेका बेला बाहिर सिमसिम पानी पर्न थाल्यो । बाहिर गएर ओत लाग्ने ठाउँ समेत थिएन । बायाँ पट्टि भिर त दायाँ पट्टि सलबलाउदै बग्ने त्रिशुली नदी । बाहिर गएका यात्रु हतपत भित्र पसे । रोकिएको गाडिमा सबै यात्रु भित्र बस्दा एकाअर्काको तातोले झनै गर्मी बढ्यो । यत्तिकैमा ४०-४५ मिनेट नै बित्यो तर गाडी अझै चलेन । गाडि नचलेको कारण कसैलाई थाहा थिएन । गाडीको लामो जाम नै भैसकेको थियो ।
कसैले गाईगुइ हल्ला गर्दै थिए – पोखरा पट्टि जाने बाटो बिग्रेकोले यता पट्टि जाम बढेको रे । कोहि भने हाम्रै राजमार्गमा पहिरो गएर बाटो बन्द भएको कुरा सुनाउदै थिए । करिब एक घण्टा नै बित्न लाग्दा गाडी चल्ला जस्तो भयो । अब चाहिँ गुड्ने भयो भनेर मन ढुक्क भयो । तर २ मिनेट नगुड्दै गाडी फेरि रोकियो । अगाडी पछाडी अरु गाडीहरुको ताँती थियो । दायाँ पट्टि भने ट्राफिक प्रहरीको जस्तो गाडी साइरन बजाइदै ओहोरदोहोर गर्दै थियो । यत्तिकैमा अर्को एक घण्टा बित्नै लाग्यो । गाडी फेरि गुड्न थाल्यो तर १-२ मिनेट मै रोकियो । बिपरित दिशाबाट अलिअलि गाडी आउन थालेका थिए । पटकपटक गाडी यसरि नै एक छिन चल्ने र बेसि रोकिने क्रम चली नै रह्यो । गर्मीले सताईरहेका बेला निन्द्राले पनि च्याप्दै थियो । थोरै भोक पनि लागेजस्तो हुँदै थियो । कोहि मान्छेहरू चाउचाउ बिस्कुट र पानी समेत खादै थिए । अन्तिम सिटतिर बस्ने आफुलाई स्टाफ नर्स बताउने एक युवतीले भने दुई-तीन जना केटाहरुसंगै बसेर सबैले सुन्ने गरि गफ उडाउदै थिइन् ।
गाडी गुड्ने र रोकिने क्रम चलिरहेकै थियो । हिजो बेलुका ५ बजे काठमाडौबाट छुटेको बस बिहानको ५ बज्नै लाग्दा समेत नारायणगढ (चितवन) पुग्न सकेको थिएन । गाडि अझै आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यत्तिकै म फेरि निदाएछु । केही समयपछी म बिउँझदा बाहिर उज्यालो भैसकेको थियो । घडी हेरे ८ बजिसकेछ तर हामी अझै चितवनको रामनगरतिर नै रहेछौं । बाहिर बाटोमा बुङ्बुङ धुलो उड्दै थियो । बाटोको अवस्था हेर्दा कच्ची रोड जस्तो थियो । बाटो बनाउनलाई ठाउँठाँउमा भत्काएको रहेछ । बाटोको यस्तो दुरावस्था र चाडवाडको बेला गाडिको चापले गर्दा यति साह्रो जाम भएको हुनुपर्छ । नारायणगढ पुग्दासम्म बाटोको अवस्था यस्तै थियो । बिहानको ९ बज्नै लाग्दा बल्ल नारायणीको पुल पार गरियो । यतिबेला सम्म गन्तव्यमा पुगिसक्नु पर्ने हामी बल्ल बल्ल आधा यात्रा तय गर्दै थियौं ।
बिहानको १० बज्नै लाग्दा नवलपरासी जिल्लाको राजमार्ग छेउको एक ठाउँमा फेरि खाना खानलाई गाडी रोकियो । अरुबेला यात्राको क्रममा एकपटक खाना खाए पुग्थ्यो तर यसपटक दुइचोटी खाना खान बाध्य भैयो । त्यो पनि चर्को मुल्यमा गुणस्तरहिन र नमिठो खाना । जेहोस् बेलुकाको भन्दा बिहानको खाना भने केही राम्रो रहेछ । खाना खाईसकेपछी हामी फेरि गन्तव्य तिर नै हानियौं । अहिले भने गाडी मज्जाले फिलिली दौडिरहेको थियो । यसरी ठाउँठाउँमा सानातिना अफ्ठ्यारा पन्छ्याउदै बल्ल बेलुकाको ६ बज्नै लाग्दा हामी आफ्नो गन्तव्य तुल्सिपुर पुग्यौं । करिब १२ घण्टामा पुगिने ठाउँमा हामी झण्डै २५ घण्टामा पुगेका थियौँ । यति लामो समय बसमा यात्रा गरेको साहेद मेरो यो पहिलो घटना हुन सक्छ ।
मेरो त्यो गन्तव्य त थियो तर अन्तिम गन्तव्य (आफ्नो घर) भने अवश्य थिएन । त्यो दिन त्यही दिदीकोमा बसियो र भोलिपल्ट घरको यात्रा थालियो । त्यसदिनको यात्रा समेत अघिल्लो दिनको यात्रासंग फरक थिएन । न राम्ररी सिटमा बस्न पाइएको थियो न भनेको समयमै पुगिएको थियो । बीचमा गाडी बिग्रेको कारण त्यो दिन पनि अढाई घण्टाको बाटोमा झण्डै पाँच घण्टा लागेको थियो ।
लामो यात्रामा यस अघि सानातिना समस्या त नभोगेको होइन तर यसपटक भने अलि धेरै नै भोगियो । त्यसैले, दशैंको बिदाको फुर्सदमा यसलाई यात्रा संस्मरणरुपी ब्लग समेत बनाउन भ्याएँ । यस्तो भोगाई मेरो मात्र नभइ लामो दुरीको यात्रा गर्ने (बिशेषगरि ठुला चाडपर्वको बेला) कयौं मानिसहरुको साझा भोगाई हुन सक्छ । समयको विकासक्रम संगै हाम्रो यातायात व्यवस्था र सडक संजालको आधुनिकीकरणका नाराहरु बेलाबेला नेताहरुबाट सुन्ने गरिन्छ । तर, व्यबहारमा सुध्रिनुको साटो झन बिग्रदै जाने गरेको पाउँदा देशको अवस्था प्रति नै चिन्ता लागेर आउँछ ।
October 26, 2016 November 24, 2017 यात्रा संस्मरण, featured
Published by रोहित ओली
View all posts by रोहित ओली
One thought on “यात्रा संस्मरण: राप्ती एक्सप्रेस”
राम्रो प्रस्तुति, ओलिजिको मोहित पार्ने बोलि ! झन्डै १०-१२ बर्ष अघि भोगेका धेरै दशैंहरु यसरि नै बसमा घोच्चिएर, थेप्चिएर र नेप्चिएर दशा हुने कुरा गरेको याद आयो । धेरै ”तन्त्र”हरु आउँदा पनि दशैंहरुको ‘दशा’ त्यस्तै देख्दा ‘विकल्प’ को चाहना झन तिब्र भएको छ । 🙂
Previous Previous post: गजल
Next Next post: मनमा अचानक उब्जिएको रहर जसले मलाई यी फोटो खिच्न बाध्य बनायो
मनमा अचानक उब्जिएको रहर जसले मलाई यी फोटो खिच्न बाध्य बनायो
नयाँ बर्ष; पुरानै म
मलाई ई-मेलमा पढ्नुहोस्
तपाईको ई-मेल ठेगाना दिनुहोस् ।
अभिलेखालय Select Month November 2016 October 2016 April 2016
मेरो सामाजिक संजाल
View olirohit’s profile on Facebook
View olirohit’s profile on Twitter
View rohitoli’s profile on Instagram
View RohitOli’s profile on Google+